अर्घाखाँची : ५० शैय्याको अस्पतालमा एक जना डाक्टर पनि नभएपछी सेवा र सम्पर्क विहीन – Khash Khabar
सुशासनस्वास्थ्य / जीवनशैली
अर्घाखाँची : ५० शैय्याको अस्पतालमा एक जना डाक्टर पनि नभएपछी सेवा र सम्पर्क विहीन
खासखबर३ हप्ता अघि
काठामाडौं । गत २६ साउनमै अर्घाखाँची अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गरे पनि एक वर्ष पुग्नै लाग्दासम्म पनि अक्सिजन उत्पादन भने भएको छैन ।
तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. कपिल गौतमको सक्रियताका बेला मुहार फेरेको अर्घाखाँची अस्पताल यतिबेला पुरानै स्वरुपमा फर्किएको छ । डा. गौतमको कार्यकालमा अक्सिजन प्लान्ट मात्र होइन, थाइराइड परीक्षण, २४ घण्टा टिकट काउन्टर, सिसीटीभी क्यामेरा, टोकन मेसिन, दन्त परीक्षण सेवासहितका विभिन्न सेवा थपिएका थिए । तर, अहिले ति सबै सेवा अत्तो न पत्तो भएको छ ।
अस्पतालका १२ वटा सिसीटीभी क्यामेरामध्ये अहिले एउटैले काम गर्दैनन्, बिरामीलाई लाइनमा बस्न समस्या नहोस् भनेर सुुरु गरेको टोकन मेसिन बन्द भएको धेरै भइसक्यो, टिकट लिइसकेपछि नम्बर लेखाउन गार्ड खोज्दै हिँड्नु पर्ने अवस्था छ । हरेक शाखा तथा वार्डमा राखिएका डिजिटल बोर्ड कुनैले पनि काम गर्दैनन् भने शौचालयमा बत्ती बल्दैनन् ।
५० शैय्याको अर्घाखाँची अस्पतालमा १६ जना डाक्टरको दरबन्दी छ । नौ जना विशेषज्ञ र सात जना एमबीबीएस डाक्टरको दरबन्दी भए पनि अहिले अस्पतालमा एक जना पनि डाक्टर छैनन् । एक जना मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, छात्रवृत्तिमा आएका तीन जना र एक जना निक साइमन्सको सहयोगमा आएका डाक्टरले अस्पताल धानिरहेका छन् ।
दरबन्दी अनुसारका डाक्टर नहुँदा बिरामीहरू ओपीडीमा उपचारको लागि घण्टौँ लाइन लाग्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
सम्पर्कविहीन कार्यालय प्रमुख
‘०७७–४२०२५७’ अर्घाखाँची अस्पतालको आधिकारिक टेलिफोन नम्बर यही हो । अस्पतालका प्रमुखको नम्बर पनि सार्वजनिक जत्तिकै छ । तर, यी दुवै फोन कहिल्यै उठ्दैनन् ।
५० शैय्याको अस्पताल सम्पर्क विहीन सेवा
रुकुमकोटमा खानेपानीको अभाव
संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइ आज